‘जब मान्छे अप्ठ्यारोमा पर्छ त्यहाँ भगवानको रुपमा पाउने भनेको प्रहरी नै हो’ – मोरङ प्रहरी प्रमुख खड्का – SajhaPana
‘जब मान्छे अप्ठ्यारोमा पर्छ त्यहाँ भगवानको रुपमा पाउने भनेको प्रहरी नै हो’ – मोरङ प्रहरी प्रमुख खड्का
मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्का २०७७ साउन १ गते १२:५९ मा प्रकाशित
समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा नेपाल प्रहरीको भूमिका कमजोर भएको, शंकास्पद भएको जनगुनासो बढ्दो छ । ‘प्रहरी मेरो साथी, समुदाय प्रहरी साझेदारी, मुस्कान सहितको सेवा’ प्रहरी र जनताबीचको दूरी घटाउन र समाजमा व्याप्त अपराध निर्मलीकरण गर्न ल्याइएको आकर्षक नारा भएपनि व्यवहारतः लागू नभएको होकि ? कि प्रहरी संगठनको व्यवस्थापन कमजोर भएर समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा समस्या भएको त हैन ? योसँगै प्रहरीका कतिपय काम कारबाही नै निष्पक्ष र न्यायको सिद्धान्तअनुसार नभएर पनि जनतासँग प्रहरीको दूरी बढेको हो ? यस्तै विषयमा मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्कासँग गरिएको कुराकानीको संक्षेपः
कोभिड–१९को संक्रमणसँगै लामो समयदेखि लकडाउनको अवस्था छ, समाजमा अपराध गर्नेहरुको संख्या बढेको होकि, घटेको हो ?
निश्चयः नैै कोभिड– १९ ले संसार आक्रान्त छ । यसबाट कसरी बच्ने, कसरी जोगिनेलगायतका विषयमा आम नागरिकहरुको चासो र सचेतना बढेको छ । यति हुँदा पनि अपराधजन्य घटनाहरु नभएको भन्ने चाहिँ होइन । घटना त घटिनै रहेकाछन् तर केही कमी भने आएको छ ।
लकडाउनमा कस्ता प्रकृतिका अपराधहरु भइरहेका छन् ?
आवेगमा आएर उत्प्रेरित भएर हुने घटनाहरु छन् । अहिले घरेलु हिंसाका घटनाको धेरै उजुरीहरु आइरहेका छन् ।
सामाजिक आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीले समुदाय साझेदारी प्रहरी कार्यक्रम ल्याएपनि प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण के हो ? अपराधीले अपराध गरेको एक घन्टापछि मात्र जानुहुन्छ ?
नेपाल प्रहरी जनताको प्रहरी हो । हामी जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि अहोरात्र खटिरहेका छौं । यसै अन्तर्गत जनताले अझै प्रभावकारी सेवा सुविधा पाउन सक्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले सामुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम ल्याइएको हो । यो कार्यक्रममा हामीलाई जनताको धेरै समर्थन भएको छ । शान्ति सुरक्षाप्रतिका चेतनाका कुराहरु, अपराध गर्दा रिपोटिङ्ग गर्ने तरिकाहरुदेखि लिएर समाजमा शान्ति सुरक्षा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नागरिक आफैँले भन्ने विषयका कुराहरु छन् । त्यसमा लागूऔषध पर्छ । जघन्य घटनाका कुराहरु भए, मानव बेचबिखनका कुराहरु छन् । बलात्कारका घटनाहरुबाट जोगिने कुराहरु छन् । धेरै कुरा त्यसको प्याकेजमा परेको छ ।
यो कार्यक्रम जाँदा जाँदै कारोनाका कारण केही समय विश्राम लिएको जस्तो देखिएको मात्रै हो । स्थिति सामान्य हुनासाथ जनस्तरमा लिएर जान्छौं । यहाँको अर्को चासो थियो प्रहरी अपराध गरेको स्थानमा किन ढिला पुग्छ भन्ने । हामी क्रमैसँग प्रहरीको रेस्पोन्स र घटनास्थलमा प्रहरी पुग्ने कुराहरुलाई सुधार गर्दै लगिरहेका छौं । हाम्रो डाटाहरुले त्यहीँ नै बताउँछ । केही त्यस्ता प्रतिनिधि घटनाहरु पर्छन् त्यसलाई नकार्दिनँ तर पनि हामी जनताकै लागि खटिने भएको हुँदा, सूचना प्राप्त भए अनुसार यथासम्भव चाँडै पुग्ने प्रयासहरु गरिरहेका छौं । त्यसमा हाम्रो सवारी साधनका कुराहरु, जनशक्तिलाई ट्रेन गर्ने लगायतका कुराहरुमा म आइकन जिल्लामा धेरै कामहरु भइरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीले भन्ने बेलामा प्रहरी मेरो साथी, समुदाय प्रहरी साझेदारी भन्ने तर, व्यवहारमा चाहिँ किन लागू गर्न नसकेको ? भन्नुको तात्पर्य आम जनताले नेपाल प्रहरीप्रति अझै विश्वास गर्न नसक्नुको कारण के हो ?
नेपाल प्रहरी जनताको प्रहरी हो । हामी जनताकै लागि खटिरहेका छौं अहोरात्र, हामीलाई काम गर्दा हामीले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न ऐनहरु छन् । त्यो ऐनको अधिनमा रहेर हामी जनसेवामा खटेका हुन्छौं । काम गर्ने सन्दर्भमा कानून कार्यान्यवन गर्ने सन्दर्भमा जसले कानूनलाई मिच्छन् त्यस्ता अपराधीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनपर्ने हुन्छ । त्यहीँ भएर त्यो मान्छेसँग जोडिएका मान्छेहरुको केही विमती रहन्छ अन्यथा जसले कानूनी उपचार पाइरहनु भएको छ । जसले न्याय पाउनुहुन्छ उहाँहरु खुशी नै हुनुहुन्छ ।
जनताले हामीलाई अझै विश्वास गर्न नसक्नुमा त्यति ठुलो कुरा छैन जब मान्छे अप्ठयारोमा पर्छ त्यहाँ भगवान्को रुपमा पाउने अर्को रुप भनेको प्रहरी नै हो । हामीले हाम्रो सेवा अझै गुणस्तरीय र प्रभावकारी हिसाबले लानुपर्ने अझै चुनौतीहरु चाहिँ छन् । र, यसमा सुधार गर्न दृढ पनि छौं ।
मोरङ राजनीतिक, आर्थिक हिसाबले मुलुकको महत्वपूर्ण आधार क्षेत्र हो, यहाँ राजनीतिक र आर्थिक कारणले के कस्ता अपराध हुन्छन् र ती अपराध कर्ममा संलग्न हुनेहरुको पृष्ठभूमी कस्तो पाउनुहुन्छ ?
अपराध भनेको राजनीति, उद्योगधन्दासँग यसको कुनै पनि सरोकार हुन्छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन । हामीले जबसम्म अपराधलाई कुनै घरानियाँ परिवारसँग अथवा राजनीतिसँग जोड्छौं भने गलत हुन्छ । जब हामी अपराधलाई विशुद्ध अपराधको हिसाबले हेर्छौं तब, शान्त्ति सुरक्षा मजबूद हुन्छ र देशमा कानूनी राज्य रहन्छ ।
अपराधको कुनै जात, धर्म हुँदैन मान्छेले गर्ने अपराधलाई दण्डनीय गर्न, अपराध निरुत्साहित गर्नका लागि, पीडितले न्याय पाओस् भन्नका लागि विभिन्न कानूनहरु व्यवस्था भएका छन् । त्यो कानूनमार्फत् हामीले काम गर्ने हो र त्यसलाई हामी एकदमै प्रतिवद्ध भएर कसैको पक्षमा नलागिकन कार्यान्वयन गर्छौं ।
अपराधी पक्राउ गरेपछि त्यसलाई छुटाउन राजनीतिक, सामाजिक दवाव कत्तिको फेस गर्नुपर्छ ?
यस्तो प्रश्न आउने गर्दछ, यहाँलाई अघि पनि जानकारी गराएँ म यहाँ आइकन कुनै पनि राजनीतिक दवाव, प्रभावमा पार्ने कामहरु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । कहिलेकाहीँ हामीलाई आधा मात्रै सूचना प्राप्त भएकाले गलत गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरुबाट प्राप्त सूचनालाई दवावको हिसाबमा हैन कि, अनुसन्धानलाई पूर्ण गर्न हामीलाई पृष्ठपोषण गरीदिनुभएको मलाई महसुस भएको छ ।
मोरङ प्रहरीलाई आरोप छ नि, ठूला राजनीतिक दल र व्यापारीको दवावमा संगठित अपराध गर्ने, औद्योगिक अपराध गर्नेलाई संरक्षण गर्नुहुन्छ रे ? भन्नुको अर्थ, कालो बजारी गर्नेसँग मोरङ प्रहरीको राम्रै साँठगाँठ छ रे ?
तपाईँहरुले यस्तो चासो जिज्ञासा राख्नु नराम्रो मलाई लाग्दैन । सँगसँगै प्रहरीको कार्यसीमा, दिएको अधिकारको कुराहरु कतिको उपयोग गरिरहेको छ भन्ने कुराहरु महत्वपूर्ण हुन्छ । कालोबजारी नियन्त्रणमा हामी कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्नेवाला छैनौं । कतिपय अवस्थामा कालोबजारी नियन्त्रणका लागि छुटटै समिति छ । जब जनगुनासोहरु बढ्छ, उहाँहरुसँग मिलेर सहकार्य गरेर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएको अवस्था छ ।
केही समयअगाडि ठूल्ठूला कारबाही पनि भएको छ विराटनगरमा । म चाहान्छु कसैले कालोबजारी गरिरहेको छ अथवा जानकारीमा छ भने कृपया हामी सूचनाको पनि अपेक्षा गर्छौं । र, कालो बजारी गर्नेलाई मोरङ प्रहरीले छुट कदापि दिने छैन ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने आपराधिक घटना नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीको भूमिका नै देखिन्न नी ?
यो प्रश्नमा तपाईसँग सहमत छैन । किन भन्नुहुन्छ भने हामीलाई सबै ठूलो आरोप आउने र लान्छना लगाउने एउटा विषय सिमानामा सामानको अवैध ओसारपसार गर्ने सम्बन्ध हो । विडम्बना भन्नुपर्छ खुल्ला सिमानाका कारण र कतिपयको जग्गा जमिन नै सीमापारि भएकाले उहाँहरुको आवतजावतलाई रोक्न सकिएन तर, कुनै पनि स्वरुपको तस्करीलाई हामीले प्रश्रय दिएका छैनौं, हामीलाई स्वीकार्य छैन । तस्करी रोक्न लागिरहेका छौं ।
हामीले विशेष कार्ययोजना तयार गर्दैछौं सीमा क्षेत्रको अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि । त्यस क्षेत्रमा जनशक्ति थप गरेर परिचालन गरिरहेका छौं । र अब तपाईँहरुले महसुस गर्नुहुनेछ । तस्करीमा संलग्न सामान मात्रै बुझाउने नभएर मान्छे, सवारी साधन र बरामद भएको समानसहित नै भन्सार बुझाउने अभियान शुरु गरेका छौं । ताकी तस्करीमा कसैलाई संलग्न हुनका लागि प्रेरणा नमिलोस् । गलत काम गरे सजाय पनि हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न हामी खटिरहेका छौं ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकभित्र देखिएका सुरक्षा चुनौतीहरु के कस्ता छन् ? तिनको नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको भूमिका कस्तो छ ?
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न कानूनहरु निर्माण भइरहेका छन् । कति निर्माण भएर कार्यान्वयनमा पनि आइसकेका छन् । कानून कार्यान्वयन गर्ने कतिपय कुराहरुमा कानून प्रयोग गर्दै गएपछि त्यसलाई परिस्कृत गर्दैपनि लग्न सकिन्छ । संघीयताको कारणले शान्ति सुरक्षामा असर गर्छ अथवा कानून कार्यान्वयन गर्ने कुरामा असर राख्छ भन्ने होइन । समाजलाई सुरक्षित बनाउनका लागि नयाँ गाइडलाईन्स र नयाँ तरिकाले काम गर्ने अवसरहरु जुटाइदिएको छ । समाजमा कस्तो खालको नतिजा दिन्छ भन्ने विषयमा एकपटक एक खालको सर्भेगर्ने अथवा प्रभावकारीताको विषयमा जाँच्ने हाम्रो काम त होइन तर, यसको प्रभावकारीताको बारेमा अध्ययन भइरहेको हुनुपर्छ ।
समाजमा अमनचयन कायम गर्नका लागि प्रहरी एक्लैले सक्ने कुरापनि भएन, अन्य सुरक्षाका निकाय र स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँग कसरी समन्वय भइरहेको छ ?
कानून कार्यान्वयन र शान्तिसुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरी राज्यको एउटा प्रतिनिधि संस्था हो । हाम्रो जस्तै कामको प्रकृति भएका अन्य निकाय हुनुहुन्छ । नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, सम्मानित अदालत सबैनै खटिरहनु भएको छ । उहाँहरुसँगको सहकार्य एकदमै राम्रो छ । हामीलाई कुनैपनि कुरा अनुसन्धानबाट आएपछि अरु संस्थाहरुको, अरु निकायहरुको सहयोग लिने कुरा र त्यसलाई अनुसन्धान पश्चात अदालतबाट अन्तिम निर्णय दिनेसम्मको कामका लागि एकापसमा जोडिनु पर्ने हुन्छ । सौहार्दपूर्ण हिसाबले काम गरिरहेका छौं ।
प्रदेश सरकारसँग नेपाल प्रहरीले किन समन्वय गर्न सकेन, प्रादेशिक संरचनामा नेपाल प्रहरीको भूमिका के कारणले कमजोर भयो ?
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने तहमा जाँदाखेरी प्रादेशिक सरकारको मातहतमा छुट्टै प्रहरी हुने भन्ने ऐन माथिबाट आइसकेको छ । यो चाँडै कार्यान्वयन हुने तहमा पनि छ । अलिकति योबीचको समय भएको हुनाले सायद त्यस्तो लागेको हुनसक्छ । प्रदेशको आफ्नै प्रहरी हुने हुँदा प्रदेशले आफ्नो प्रहरीलाई राम्रो बनाउने काममा उसको पनि ध्यान जाने नै छ र प्रहरीले पनि म यो प्रदेशमा काम गर्ने प्रहरी यहाँको जनतालाई मैले सेवा दिनुपर्छ र अरु प्रदेशको भन्दा हामीले उत्कृष्ट प्रहरी भएर देखाउनुपर्छ भन्ने अवसर पनि छ ।
कुनै बेला नेपाल प्रहरी अनुसन्धान र अपराध नियन्त्रण गर्ने सवालमा विश्वकै उत्कृष्ट प्रहरीमा गनिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय खस्कँदै जानुको कारण के हो ?
हामी अहिले पनि उत्कृष्ट नै छौँ । कतिपय घटनाहरु प्रविधिको कारणले गर्दा हुनसक्छ । अथवा अपराध गर्ने तरिकाहरुको विषयमा हुनसक्छ, वा बहुउद्देश्यीय अपराधीहरु संलग्न भएर गरिने अपराधहरुका कुराहरु छन् । यसमा हाम्रो अनुसन्धानको पाटोमा तालिमरत दक्ष जनशक्तिहरु हुनुहुन्छ । धेरै नेटवर्कहरु केलाउनुपर्ने, देश देशहरुको आपराधीहरुको सांगठनिक अवस्था, तिनीहरुको सञ्जाल कसरी काम गरीरहेको छ ? भन्ने कुराहरु बाहिर ल्याउनुपर्ने भएको हुनाले अलिक समय लाग्न सक्छ केही घटनाहरुमा । तर, अन्य घटनाहरुमा हामीले सफल अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।
नेपाल प्रहरीलाई जनताको प्रहरी बनाउन कस्तो रणनीति र कार्यक्रम चाहिन्छ ? कस्तो स्रोत साधन भए तपाईँहरु घटना घटेको स्थानमा क्विक रेस्पोन्स गर्न पुग्नुहुन्छ ?
राम्रो प्रश्न यहाँको । हामी तालिम प्राप्त छौं । दक्ष जनशक्ति हौँ । हामीलाई अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षाका लागि संगठनले, राज्यले दक्ष बनाएर पठाएको छ । तथापी, हामी सानो देशको प्रहरी हौं । हामीसँग केही सीमितता पनि छन् । विशेष गरेर अनुसन्धानका लागि उपयुक्त साधनहरु जस्तैः सिसि क्यामेरा, सवारी साधन अन्य अनुसन्धानका लागि हामीले प्रयोग गर्ने ल्याबका अभावका कुराहरु छन् ।
समय सापेक्ष सुधार पनि गर्दै लगिरहेका छौं । यसको नतिजा पनि हामीले उपभोग गरिरहेका छौं । यसमा अझै प्रभावकारी हिसाबले ल्याउन सकियो भनेदेखि हामीले सडकमा पनि प्रहरी राख्नुपर्दैन । सिसि क्यामेराले सम्पूर्ण गतिविधि मनिटर गरिरहेको हुन्छ । विभिन्न पकेटहरुमा हाम्रो प्रहरी हुन्छ । कुनै पनि घटना घट्ना साथ फोन आउनु पर्दैन प्रहरीले नै मनिटर गरिरहेको हुन्छ । त्यो अवस्था हामी कहाँ आउनलाई केही समय लाग्छ । यहाँ सडकका कुराहरु छन्, साधन श्रोतका कुराहरु छन् । हामी आशावादी छौं सुधार भइरहेको छ ।
खासगरी साधन स्रोतका सन्दर्भमा, प्रहरीका सवारी साधनमा व्यापारीहरुले प्रेटोल हालिदिन्छन् रे ? कसैबाट प्रभावित भएपछि प्रहरीले त्यहाँ निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?
म तपाईँको कुरालाई स्वीकार्दिनँ । हामीसँग अभाव छ तर त्यो भन्दैमा कसैसँग मागेर गुजारा चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा मेरो विमति छ । कतिपय अवस्थामा हामीले सहयोग लिएको छौं । जस्तो संस्थागत हिसाबले महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको जनतालाई सुरक्षा दिने सन्दर्भमा यहाँको प्रहरीलाई सवल बनाउनु नराम्रो कुरा होइन । तर व्यक्तिगत हिसाबले कुनै पनि सुविधाहरु चाहिँ ग्राहय छैन र म त्यो हुन दिन्न । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा प्रहरी संगठनभित्रका विषयलाई चुनौतीभन्दा पनि अवसर भन्न चाहन्छु । खासै चुनौतीहरु छैन हामीलाई दीक्षित गरिएको छ, हामीलाई दक्ष बनाइएको छ, चुनौतीलाई सामना गर्न गर्नका लागि भनेर तयार भएका जनशक्तिहरु हौं ।
समाजमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि होस् अथवा विभिन्न समयमा आउने दैवि प्रकोपका घटनाहरुमा होस् हामी खटिन पाउँदा हाम्रो लागि त्यो गौरवको कुरा हो । हामी जनताका लागि काम गर्ने भएकाले यसमा एउटा अवसर पाएका हौं, मौका पाएका हौं । एउटा पीडितले न्याय पाउँछ अथवा कुनै विपद्मा परेको व्यक्तिले उद्धार र सहयोग पाउँदा त्यतिबेला उसको मुखमा देखिने एउटा मुस्कान हाम्रो लागि मुल्यवान् हुन्छ र त्यहीँ आशाका साथ काम गरिरहेका हुन्छौं ।